Iindaba-Yeyiphi engcono, i-porcelain emhlophe okanye i-porcelain entsha yethambo, mandazise?
indebe kunye ne-usaucer
Yeyiphi engcono, i-porcelain emhlophe okanye i-porcelain entsha yethambo, mandazise?
I-Porcelain tableware yeyona itafile iqhelekileyo kwitafile yemihla ngemihla. Ngokwezinto ezisetyenziswayo, i-porcelain tableware yahlulwe yabe-porcelain emhlophe, i-bone porcelain tableware, kunye ne-shell porcelain tableware. Phakathi kwazo, i-bone china tableware ithandwa kakhulu.
I-Bone china ekuqaleni yayibizwa ngokuba yi-bone china, kodwa abantu babecinga ukuba igama elithi "ash" alikho "lihle", ke balitshintsha igama labo laba li-china bone, okanye i-bone china ngokufutshane. I-Bone china iqulethe ngaphezulu kwe-40% yothuthu lwezityalo ezitya utyani kwaye iyimveliso yabathengi eluhlaza eluhlaza. Xa kuthelekiswa neeseramikhi eziqhelekileyo, inkqubo ekhethekileyo yokudubula kunye nomxholo wethambo lekhabhoni yenza ukuba ithambo le-china libonakale limhlophe, libuthathaka, libala kwaye lilula. Xa uthenga i-bone china tableware, unokuhlulahlula ngezi ndlela zintathu zilandelayo.
Inye, ithemba. Umbala wethambo le-china: ithambo le-china ngokwalo licwecwe elimhlophe ngokwendalo ngenxa yomgubo wethambo, othe tyaba kumagama athandwayo. Eli nqaku alinakuxeliswa nayiphina enye iphosele.
Ezona ntlobo zibalulekileyo ze porcelain kwintengiso ngoku, ezinje nge porcelain emhlophe, i-shell porcelain, kunye neeperile ze porcelain zonke zimhlophe nyulu. Singawuchaza umhlophe omhlophe njengombala ublue-mhlophe; Okwesibini, zonke zingamathambo e-china, kodwa ukusuka kwinqanaba lokutyheli unokuxela umxholo womgubo wethambo china ngokwawo. Kwithambo le-china, umxholo wethambo lomgubo sisalathiso esibalulekileyo sobuchwephesha ukwahlula inqanaba lethambo le-china. I-powder eyongezelelekileyo, i-china ephezulu ye-bone ye-bone, kunye nombala we-bone we-china uhlala umhlophe omhlophe. Ngokuchasene noko, ukuba umxholo wesidlo seethambo uphantsi, ubumthubi beethambo china uqobo buyabonakala.
Okwesibini, phunga. Isandi setshayina china: Ngenxa yokuveliswa kwayo, kukho into ebalulekileyo yangaphandle yethambo china, sisandi esenziwe xa ithambo le-china lingqubana-beka izitya zeethambo ze-china eziphakamileyo kwizandla zakho ezithe tyaba ukudibana, naka ingqalelo, I-Bone china yiporcelain edubula kubushushu obuphezulu. Ukuqina kuphezulu kakhulu. Olu hlobo lwengozi aluyi konakaliswa. Ungangqubana nobunzima kancinci. I-china yamathambo aphezulu e-china iya kukhupha njengentsimbi emva kwengozi. Isandi se “clang” siyangqinwa, kwaye ixesha le-echo lide, ngelixa ezinye iiporcelain zisenza isandi esingathandekiyo, kwaye akukho sandi.
Ixesha Post: Dis-10-2020
Bhalisa kwincwadana yethu
kwimidiya yethu yoluntu
Kumgangatho we-903,9th, Ukwakha i-A4, iLiLang International jewelry park, BuLan Rd, Street Street, LongGang, ShenZhen China
Ngaba i-tableware ye-china tableware ilula kakhulu ...
Yeyiphi engcono, i-porcelain emhlophe okanye i-b entsha ...
Uthini umahluko phakathi kweeseramiki ...
© Copyright - 2020-2021: Onke amalungelo agciniwe.